Qaabka 3D ee Darbiga
Waa maxay ...
Sida aan wada ognahay, marmar waa ...
Faa'iidooyinka mar ...
Dad aad u tiro badan ayaa dooranaya ...
Isticmaalka waxyaabaha matooriga ah ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya marmarka dabiiciga ah iyo marmarka macmalka ah?
Sida aan wada ogsoonahay, marmarku waa shey fiican oo darajo ah.Sidaa darteed qoysas badan ayaa u adeegsada marmar qurxinteeda, marmartuna waxay leedahay marmar dabiici ah iyo marmar faux ah.Way aad u badan yihiin. Iyo hadday tahay marmar macmal ah ama marmar dabiici ah waxay leedahay faa iidooyin iyo khasaaro u gaar ah. Hordhac Marmar macmal ah i ...
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa doorta inay isticmaalaan miisaska marmar sababa la xiriira muuqaalkiisa quruxda badan iyo astaamo badan oo aad u fiican. Marka ugu horeysa, adkaanta sare Ma fududa in wax laga beddelo. Marble dabiici ah waa inuu dhaafo sannado badan si uu si dabiici ah u sameysto Sidaa darteed dabiici ahaan waa isku mid qaabdhismeedkiisa. Iyo fidinta qadka toosan ...
Adeegsiga qalabka bannaan ayaa si joogto ah u soo saaraysa wax cusub, qalab kala duwan oo dhisme ah ayaa si tartiib tartiib ah u soo galay aragtidayada. Soojiidashada marmar ayaan hoos u dhicin tan iyo wakhtiyadii hore. Marmarka jawiga sharafta leh ayaa qurxiya, sida farshaxanka dabeecadda noqotaa, ku milmi kara wh ...
Xiamen Morningstar Stone Co., LTD waxaa la aasaasay bishii Nofeembar 23, 2017 wuxuuna ka diiwaangashan yahay Xiamen, magaalo qurux badan oo jasiirad ah, oo inta badan ku hawlan dhammaan noocyada kala duwan ee marmarka casriga ah, granite, tiirarka qaabeynta gaarka ah, iwm. .